किन दुब्लाए उत्तर कोरीयाली शासक किम जोङ उन? यस्तो रहेछ कारण – List Khabar
Home / समाचार / किन दुब्लाए उत्तर कोरीयाली शासक किम जोङ उन? यस्तो रहेछ कारण
किन दुब्लाए उत्तर कोरीयाली शासक किम जोङ उन? यस्तो रहेछ कारण
admin January 2, 2022 समाचार Leaveacomment 130 Views
उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उन पातलो देखिएका छन् । मोटो शरीरका उनी यसपटक सार्वजनिक रुपमा देखिदा पातलो देखिएका हुन् । उनको पातलो शरीरबारे विश्वभर चासो बढेको छ । किमले यसपटक आफ्नो शासनको १०औं वर्षगाँठ मनाए । उनले विगतमा भन्दा फरक घोषणा गरे । सधैजसो ह ति या र निर्माण र अमेरिकाको आलोचना गर्ने किमले यसपटक आर्थिक विकासको कुरा गरे ।
उनले समृद्धिसँगै कोरियाली जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुरा गरे । उनले ट्याक्टर उद्दोग र विद्यालय पोशाकमा बढी जोड दिए । उनको भाषणमा अमेरिकाभन्दा बढी जनताको जीवनस्तरका विषय थिए । शुक्रबार वकर्स पार्टी अफ कोरियाको आठौं केन्द्रीय कमिटीको चौंठो प्लेनरी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विदेश मामलामा भन्दा कोरियाभित्रकै विषयमा बढी बोले । उनले विकास योजना र जनताको जीवनबारे बढी शब्द खर्चिए ।
उत्तर कोरिया भो क म री सँग जु ध्दै आएको छ । उसले कृषिमा भन्दा बढी अन्य निर्माणमा ध्यान दिएको विषय उठ्ने गरेको छ । कठोर शासनको कम्युनिस्ट राष्ट्र उत्तर कोरिया एउटै परिवारको शासनबाट चल्दै आएको छ । किम जोङ उनभन्दा अघि उनका पिता किम जोङ इल र हजुरबुवा किम इल सुङले उत्तर कोरियामा शासन गरेका थिए ।
Previous के तपाईंले कहिले याद गर्नुभएको छ ? कपाल र नङ काट्दा किन दुख्दैन ? किन हुनेगर्छ यस्तो ?
Next कसले कु ट्यो अमेरीकामा कन्सर्ट गर्दै गर्दा राजेश पायल राई लाई? आयो यस्तो जानकारी (भिडियो हेर्नुहोस्)